Jadwalka Carruurta ugu Fiican ee Saxarada iyo Dhismayaasha Dhismayaasha Soo saaraha iyo Warshad | Yilibao
Waxbarashada: Miisaska waxaa ku yaal buqshad dhisme, oo carruurtu waxay ku ciyaari karaan baloogyo. Kuwani waxay ku fiican yihiin waxbarashada ilmaha.
Qaabka wax soo saarka
Nooca 01 (wareega)
Nooca 02 (saddexagal)
Miiska carruurta:78.5 * 53 * 50cm
Saxarada caruurta:30 * 23 * 25.5cm
Miiska carruurta:67 * 67 * 50cm
Saxarada caruurta:33.5 * 29.5 * 35.5cm
1 unug / kartoon;
Cabbirka kartoonka: 80cm * 21cm * 56cm
Cabbirka kartoonka: 79 * 17 * 68cm
1. Waxbarasho: Miisaska waxaa ku yaal buqshad dhisme, carruurtuna waxay ku ciyaari karaan baloogyo. Kuwani waxay ku fiican yihiin waxbarashada ilmaha.
2. Si fudud loo nadiifiyo: Miisku miyuusan biyo lahayn, waxaad ku nadiifin kartaa maro qoyan, way fududahay in la nadiifiyo.
3. La dhaqaajin karo: Miiska carruurta iyo saxarada waa la kala qaybin karaa, marka way fududahay in la keydiyo.
4. Midabbo dhalaalaya iyo khadad siman
Miisaska balaastigga ah waa kuwo dhalaalaya oo midabbo leh, marka lagu daro kuwa cad, casaanka, oranjiga, jaallaha ah, cagaarka ah, buluug ah, buluug ah iyo guduud ah ... Midabbo kala duwan ayaa la heli karaa, isla markaana saamaynta muuqaalka ee dhalaalaysaa waxay dadka u keentaa raaxo muuqaal ah Isla mar ahaantaana, maadaama miisaska balaastigga ah dhammaantood ay sameysmeen wasakhahaasi, waxay leeyihiin astaamo cajaa'ib leh oo xarriiqyo siman leh.
5. Qaabab kala duwan oo qurux badan
Miiska balaastigga ah wuxuu leeyahay astaamaha wax-qabadka fudud, marka qaabka alaabada noocan oo kale ah ayaa leh kala-badnaan la'aan. Qaabka kala sooc la'aanta ah wuxuu muujinayaa fikradaha naqshadeynta ee shakhsiyadeed ee aadka u shakhsiyeysan.
6. Khafiif ah, is haysta oo si fudud loo qaadan karo
Miiska balaastigga ah wuxuu dareemayaa iftiin iyo iftiin, uma baahnid inaad dadaal badan ku bixiso sidii aad si fudud ugu qaadi lahayd
7. Kala duwanaansho iyo codsi ballaadhan
Miisaska balaastigga ah kuma habboona oo keliya meelaha dadweynaha, laakiin sidoo kale waxay ku habboon yihiin guryaha caadiga ah.
8. Si fudud loo nadiifiyo oo si fudud loo ilaaliyo
Miiska caagga ahi waa wasakh oo si toos ah ayaa loogu dhaqi karaa biyo, taas oo fudud oo habboon. Intaas waxaa sii dheer, miisaska balaastigga ah ayaa fudud in la ilaaliyo, waxay leeyihiin shuruudo yar oo heer kulka gudaha iyo huurka ah, waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa deegaanno kala duwan.
Hore: TPU Gogosha Mat
Xiga: XPE Ciyaaraha aan fiicnayn ee Eco-saaxiibtinimo
Jadwalka Barashada Carruurta
Miiska Cunnada Carruurta
Jadwalka Balaastikada Caaga ah
Shaxda Daraasada Fudud
Shaxda Balaastikada Yar
Shaxda Daraasada Yar
Jadwalka Daraasada Cad